Simulator မြား, add-ons တွေကိုနှင့်ဝဘ်ဆိုဒ်အကြောင်းကိုမေးခွန်းလွှာ
ငါ၏အ Add-ons တွေကိုအချို့သည် (texture မပါဘဲ) ပွင့်လင်းသို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်ဖြစ်ကြသည်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ ? (FSX SP2 / Acceleration) မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုခု, သင် add-on တစ်ခု 3D မော်ဒယ် FS2004 ဖန်တီးပေမယ့်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်ပိုင်ဆိုင်သည့်အခါ FSX SP2 (လညျးချေါတ ...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုခု, သင် add-on တစ်ခု 3D မော်ဒယ် FS2004 ဖန်တီးပေမယ့်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်ပိုင်ဆိုင်သည့်အခါ FSX SP2 (စဆိပ်ကမ်းကျော်ခေါ်) ၏ setting တွင်ကို Preview DirectX ကို 10 ပိတ်ထားရန်ဖြစ်ပါသည် FSX။ တကယ်တော့, FS2004 addons DirectX ကို 10 နှင့်သဟဇာတမရှိကြပေ။
ဘယ်လိုလုံးဝတစ် Rikoooo add-on ကို uninstall လုပ်လိုက်လဲ? အားလုံး add-ons တွေကို Rikoooo ထံမှတူညီသောလမ်းဖြုတ်နိုင်ပါတယ်: ဒီ Windows Vista က, 7, 8 နှင့် 10.On သည့်အပေါ်အလုပ်လုပ်တယ် ...
အားလုံး Rikoooo မှ add-ons တွေကိုတူညီတဲ့လမ်း uninstall လုပ်ပေးဖို့နိုင်သည်
desktop ပေါ်မှာရက်နေ့တွင်«ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ Menu ကို Start », ထို့နောက်«အပေါ် All Programs ထို«ရန်»နဲ့သွား Rikoooo Add-ons တွေကို »
folder ကို။ သင်ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါအခါ, သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပါတယ် Add-ons တွေကိုစာရင်းကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ အခုဆိုရင်သင်ရုံ
desktop ပေါ်မှာရက်နေ့တွင်«ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ Menu ကို Start », ထို့နောက်«အပေါ် All Programs ထို«ရန်»နဲ့သွား Rikoooo Add-ons တွေကို » folder ကို။ သင်ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါအခါ, သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပါတယ် Add-ons တွေကိုစာရင်းကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft ကဂိမ်းများ \_ Microsoft ကလေယာဉ်ခရီးစဉ် Simulator X ကို \_ SimObjects \_ လေယာဉ်ပျံ \_ XXXX \_ Ohter နည်းလမ်း, သင်တို့ရှိသမျှကိုသင့်ရဲ့ add-ons တွေကိုအမြစ် folder ထဲမှာစာရွက်စာတမ်းများ, နည်းလမ်းနမူနာပါဝင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်
ပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့စာရေး« gauge »ဖိုင်တွဲသို့ကြပြီသောအခါ, ခြေရင်းဖိုင်များကိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပျောက်ဆုံးနေပါတယ်မကြာခဏဖြစ်ပါတယ်။ add-on တစ်ခုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖိုင်တွေ theses လျှင်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, က panel ကိုစ gauge ဖော်ပြရန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ မကြာခဏဖြေရှင်းချက်ပြန်လည်အတွက်ပါဝင်ပါသည် FSX။ ပြန်လည်ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် FSXသငျသညျဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် gauge Recover« gauge »နှင့်«သက်ရောက်မှု»ဖိုလ်ဒါထဲကနေတိုင်းမူရင်းဖိုင် restore လိမ့်မည်ဟု Rikoooo အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအနည်းငယ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်သော။
စနေနေ့သြဂုတ်လ 08 အပေါ် by rikoooo